WordPress နှင့်ဆွဲငင်အားပုံစံများကို အသုံးပြု၍ မှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းခြင်း Martech Zone
အသုံးချဖို့ WordPress သင်၏အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည်ယနေ့ခေတ်တွင်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေသည်။ ဤဆိုဒ်များသည်လှပသော်ငြားလည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းကိုရယူရန်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှမဆက်သွယ်ပါ။ ကုမ္ပဏီများသည် whitepapers၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများနှင့်၎င်းတို့ကို download ပြုလုပ်သောရှေးရှေးများ၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုအစဉ်အမြဲသိမ်းဆည်းခြင်းမရှိဘဲအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြကြသည်။
မှတ်ပုံတင်ပုံစံများမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောဒေါင်းလုပ်ဆွဲမှုများပါ ၀ င်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအီးမေးလ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းပင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သင်အသုံးပြုသူအား၎င်းတို့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အကြောင်းကြားခြင်းဖြစ်သည်။
သင်သည် WordPress ကိုအသုံးမပြုပါကပုံစံများသို့မဟုတ်နေရာများစွာတွင်ပုံစံများကိုအသုံးပြုလိုပါကသို့မဟုတ်အလွန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်ရှိပါကကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက်မှာအမြဲဖြစ်သည် မင်။ သင်၏ဆိုဒ်ကိုမခွဲခြားဘဲအသုံးပြုရန်၊ တည်ဆောက်ရန်နှင့် embed လုပ်ရန်မှာလွယ်ကူသည်။ သင် WordPress ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်, ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား Form များ ဒေတာဖမ်းယူမှုအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောအလွန်လူကြိုက်များသော plugin ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Gravity Forms သည် WordPress အတွက်အထူးတီထွင်ထားသောမယုံနိုင်လောက်အောင်ဆွဲချ။ ဆွဲယူသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီး၊ ပေါင်းထည့်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်မှုများရှိသည့်အပြင်၊ အကောင်းဆုံးမှာ - ၎င်းသည် WordPress အတွင်းတင်သွင်းမှုအားလုံးကိုသက်သာစေသည်။ အခြားပုံစံကိရိယာများသည်အချက်အလက်များကိုအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြင်ပဆိုက်တစ်ခုသို့တွန်းပို့လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထိုအချက်အလက်များကုန်သွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြissueနာတစ်ခုရှိပါကသင့်တွင်မည်သည့်ကူးစက်မှုမျိုးမှမရှိပါ။
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း, အစွမ်းထက်ပုံစံများ - ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သောအမြင်အာရုံပုံစံတည်းဖြတ်မှုကို သုံး၍ သင်၏ WordPress ပုံစံများကိုလျင်မြန်စွာတည်ဆောက်ပြီးပုံစံပြုပါ။ သင်၏နယ်ပယ်များကိုရွေးချယ်ပါ၊ သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုပြင်ဆင်ပါ၊ ထည့်သွင်းထားသောကိရိယာများကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏ WordPress powered site တွင်ပုံစံများကိုအလွယ်တကူ embed လုပ်ပါ။
30+ Form Fields ကိုအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည် - Gravity Forms များသည်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များသို့ပုံစံအမျိုးမျိုးထည့်သွင်းပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသည်။ သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များသည်သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ လွယ်ကူသောအသုံးပြုမှုပုံစံတည်းဖြတ်မှုကို အသုံးပြု၍ သင်အသုံးပြုမည့်နယ်ပယ်များကိုရွေးချယ်ပြီးရွေးချယ်ပါ။
အခြေအနေယုတ္တိဗေဒ - Conditional Logic သည်အသုံးပြုသူရွေးချယ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ နယ်ပယ်များ၊ ကဏ္,များ၊ စာမျက်နှာများသို့မဟုတ်တင်သွင်းသည့်ခလုတ်ကိုပင်ဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်ဝှက်ရန်သင်၏ပုံစံကိုပြင်ဆင်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ WordPress powered site ပေါ်တွင်သင်၏အသုံးပြုသူအားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုတောင်းခံသည်ကိုအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးပုံစံကိုသူတို့လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်။
အီးမေးလ်ပို့ရန်အသိပေးချက်များ - သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှထုတ်ယူထားသောအဓိက ဦး ဆောင်ချက်များအပေါ်တွင်ဆက်လက်ထားရန်ကြိုးစားနေခြင်း။ Gravity Forms တွင်အီးမေးလ်အလိုအလျောက်တုန့်ပြန်သူများရှိပြီးပုံစံတစ်ခုကိုတင်ပြသည့်အခါတိုင်းသင့်ကိုသိစေရန်ဖြစ်သည်။
တင်ယူပါဖိုင် - သင်၏သုံးစွဲသူများသည်စာရွက်စာတမ်းများတင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဓာတ်ပုံများ? ဒါလွယ်ပါတယ်။ ဖိုင်တင်ခြင်းအကွက်များကိုသင်၏ပုံစံသို့ထည့်ပြီးဖိုင်များကိုသင်၏ဆာဗာတွင်သိမ်းထားပါ။
သိမ်းဆည်းရန်နှင့်ဆက်လက် - ဒါကြောင့်သင်ဟာအသေးစိတ်ပုံစံတစ်ခုကိုရေးဆွဲထားပြီး၎င်းသည်ဖြည့်စွက်ရန်ခဏကြာနိုင်ပါသည်။ Gravity Forms ဖြင့်သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများအားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြည့်ထားသောပုံစံကိုသိမ်းဆည်းပြီး၎င်းကိုပြီးအောင်ပြန်နိုင်သည်။
တွက်ချက်မှုများ - Gravity Forms သည်သင်၏နေ့စဉ်ပုံစံပလပ်ဂင်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လည်းသင်္ချာပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တင်သွင်းထားသောလယ်ကွင်းတန်ဖိုးများကို အခြေခံ၍ အဆင့်မြင့်တွက်ချက်မှုများကိုပြုလုပ်ပြီးသင်၏သူငယ်ချင်းများကိုအံ့အားသင့်စေပါ။
Integrated - Mailchimp၊ PayPal၊ Stripe၊ Highrise၊ Freshbooks၊ Dropbox၊ Zapier နှင့် အခြားအရာများစွာ။ သင့်ပုံစံများကို ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အက်ပ်ပလီကေးရှင်းများစွာဖြင့် ပေါင်းစပ်ပါ။
ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား Form များ WordPress ဆိုဒ်တိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံး affiliates ဖြစ်ကြပြီးတစ်သက်တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလိုင်စင်ပိုင်ဆိုင်!
ဆွဲငင်အားပုံစံများကို download လုပ်ပါ
Tags: ဖမ်းယူဆောင်သွားပုံစံများဆွဲငင်အားဘက်ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးplugin ကိုWordPresswordpress ပုံစံများwordpress plugin ကို
11:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 19
အလွန်အသုံးဝင်သောဗီဒီယို၊ Douglas။ ထိုအရာများ လာပါစေ။
26:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 7, 46
ချစ်စရာကောင်းတယ်၊ ရိုးရှင်းပြီး ဒီ GravityForms အသစ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံးပုံစံကို ပြေးနိုင်အောင် ကူညီပေးခဲ့တယ်။ http://bit.ly/4ANvzN
အပြင်းအထန်ငြင်းခုံခြင်းကို နှစ်သက်ပါသလား။ အချို့သောစာဖတ်သူများအတွက် "ရှုပ်ထွေးမှုများ" (ဥပမာ နောက်ထပ်ခလုတ်များ) ကို ပေါင်းထည့်ထားပုံရသည်... နှင့် မှတ်ချက်များရယူရန် လုံလောက်သောခက်ခဲပါသည်။
သြဂုတ်လ 22 ရက် 2011 ခုနှစ် 7:24 နာရီ
Gravity Forms နှင့် WordPress သည် ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်တွင် အမှန်တကယ် URL ကိုဝှက်ထားရန်နှင့် တစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုနိုင်သည့် မတူညီသောဒေါင်းလုဒ် URL ကိုတင်ပြရန် သင့်တွင်အကြံပြုချက်များရှိပါသလား။ တစ်ကြိမ်တည်းဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန်အတွက် bit.ly ကဲ့သို့သော အရာတစ်ခုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ ဝယ်ယူထားသော သီချင်းများ သို့မဟုတ် အခြားဖိုင်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုရန် စဉ်းစားနေပါသည်။
သြဂုတ်လ 22 ရက် 2011 ခုနှစ် 7:51 နာရီ
အမှန်တကယ်တော့ URL အစစ်အမှန်ကို မဖုံးကွယ်ထားပါဘူး – တုံ့ပြန်ချက်အီးမေးလ်ထဲမှာ လင့်ခ်ကို ထည့်ထားတာကြောင့် တရားဝင်အီးမေးလ်လိပ်စာရှိဖို့ လိုအပ်တယ်။ အသေးအမွှားကုဒ်အချို့ဖြင့်၊ သင်သည် ၎င်းတို့အား ကုဒ်ဝှက်ထားသော အီးမေးလ်လိပ်စာဖြစ်သည့် hash ဖြင့် လင့်ခ်တစ်ခုကို ပေးဆောင်နိုင်သည် - ထို့နောက် ၎င်းတို့က ၎င်းကို နှိပ်ပါက၊ ၎င်းကို တစ်ကြိမ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသည်နှင့် အခြားမည်သူ့ကိုမျှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းမှ ရပ်တန့်ခြင်းရှိမရှိ သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ 22 ရက် 2011 ခုနှစ် 8:10 နာရီ
၎င်းကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနေပြီး လင့်ခ်ကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် စောင့်ကြည့်နေခြင်းသည် ထိရောက်မည်မဟုတ်ပါ။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်အရေအတွက်ကို လုပ်ဆောင်မည့် သုံးစွဲသူတစ်ဦးနှင့် လျင်မြန်စွာ ထုတ်လုပ်ပြီး ရှုပ်ထွေးနေသော လင့်ခ်ကို မျှဝေရန် ကိရိယာတစ်ခု၏ URL အတိုကောက်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုရခြင်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ထပ်လောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ 22 ရက် 2011 ခုနှစ် 8:37 နာရီ
မင်းက ငါလုပ်ခဲ့တာကို အတိအကျပြောခဲ့တယ်။ အဲဒါက 'အသေးအမွှားကုဒ်' အပိုင်းပါ။
ဧပြီ 30, 2013 မှာ 7: 14 AM
ဖိုင်မန်နေဂျာကိုထည့်ကာ ရိုးရှင်းသောဒေါင်းလုဒ်ဧရိယာများဖန်တီးပါ – url များ မရှိတော့ပါ။
မေလ 10, 2015 မှာ 12: 13 AM
သတင်းလွှာများအတွက် အီးမေးလ်လိပ်စာများကို ဖမ်းယူရန် drip-like popup/popover box တစ်ခုနှင့် ဆွဲငင်အားပုံစံများ + mail chimp ပေါင်းစပ်မှုကို မည်သူမျှ အသုံးမပြုပါလား။ ဤဆိုဒ်သည် drip ကို အမှန်တကယ်အသုံးပြုပြီး ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ drip ကဲ့သို့အသွင်အပြင်ကို ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Gravity Forms ကိုအသုံးပြုပြီး Mailchimp ကိုအကောင်အထည်ဖော်သော်လည်း သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာကို မတွေ့ရသေးပါ။ ငါသဘောတူတယ် - ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့ကိရိယာတစ်ခုရှိရုံနဲ့ကောင်းလိမ့်မယ်။ OptinMonster အရမ်းကြီးမဆိုးပါဘူး၊ အရမ်းပြင်ဆင်လို့ရတယ်။